Postgresql ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ cheap hosting server တွေ သိချင်တယ် - MYSTERY ZILLION
Postgresql ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ cheap hosting server တွေ သိချင်တယ်
Postgresql ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ cheat hosting server တွေ သိချင်တယ် ... Testing app လေးတစ်ခုစမ်းသပ်ချင်လို့ပါ ... Ruby ကိုလည်း အထောက်အပံ့ရချင်တယ်... Node.js လည်း ရရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ ... link လေးသိချင် share ပေးကြပါဦး....
User က data ထည့်ရင် database ထဲမှာ တစ်ခါတည်း သိမ်းပြီး တစ်ခါတည်း view ဘက်မှာပြချင်တယ် server loading မပါပဲ အလုပ်လုပ်စေချင်တယ် ... အဲဒါဘာကို အသုံးပြုရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ .. bro တို့။
အကောင်းဆုံးကတော့ digital ocean မှာ $5 တန်ဝယ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် setup လုပ်တာ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ မေးခွန်းကတော့ နားမလည်ပါ။ server loading မပါပဲ ? IndexedDB ကို သုံးချင်တာလား ?
Blog မှာ post ရေးပီး တင်ရင် Submit button နှိပ်လိုက်ရတယ် .. post က database ထဲမှာ သိမ်းသွားတယ် .. browser မှာ loading လုပ်ပီးမှ ပေါ်ပေးတယ်လေ ..အဲဒါကို browser loading မပါပဲ view page မှာ ပြပေးချင်တာ...
jQuery မှာ ajax ကို လွယ်လင့် တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ jQuery နဲ့ ajax ကို တွဲပြီး လေ့လာဖို့လိုတယ်။
ကိုယ်တိုင် Setup လုပ်တာက အဆင်မပြေဘူး စမ်းကြည့်ရုံပဲဆိုရင်တော့ Heroku မှာ Free အနေနဲ့သုံးရင်ရလိမ့်မယ် Postgres က Row 10,000 အထိ Free ရလိမ့်မယ် Computing ကတော့ Worker ၁ ခုနဲ့ဆိုရင် Free အနေနဲ့ Programming Language တွေကတော့ အတော်များများ Support လုပ်တာပဲ။
Digitial Ocean ကတော့ ပုိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ ကုိုယ့်ဟာကိုယ် setup လုပ်ရတာ မှန်ပေမယ့် tutorials လည်းပေါပါတယ်။ Heroku ကြတော့ ဈေးပုိုကြီးမယ်ထင်တယ်။
စမ်းသပ်ရုံ အသုံးပြုဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်တော့ RedHat ရဲ့ OpenShift Starter Plan (https://www.openshift.com/products/online/) ကလုံလောက်တယ်ထင်ပါတယ်.. 1 GB RAM နဲ့ 1GB storage အခမဲ့ပေးပြီး programming language တော်တော်များများနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ရတယ်...
Click နှိပ်ရင် DOM ထဲပဲ ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျ... ပြီးမှ Ajax နဲ့ Database ထဲမှာ သွားသိမ်းပေါ့..